admin admin – Online Khabar 24
पुरा खबर, वास्तुशास्त्रका अनुसार घरमा राखिने हरेक वस्तुको आ–आफ्नै दिशा हुने गर्दछ। भनिन्छ, हामीले जुन दिशामा सामान राख्छौँ, त्यसको प्रत्यक्ष असर हाम्रो जीवनमा समेत पर्ने गर्दछ। कुनै घरमा कुनै न कुनै कुरामा सबै विवाद हुने गर्दछ वा उस घरका सदस्य प्रायः विरामी हुने गर्दछन् भने त्यसको कारण वास्तु दोष हुन सक्दछ। आज हामी तपाईलाई कुनै यस्तो कुराका बारेमा जानकारी दिदैछौँ, जसको ध्यान राख्दा वास्तु दोषबाट बच्न सकिन्छ। यदी घरको मुल ढोका अगाडिनै जुता चप्पल खोलेर राख्ने बानी छ भने हटाउनु होस ढोका अगाडि नै जुता चप्पल राख्दा माता लक्ष्मी प्रबेश गर्नुहुन्न भन्ने मान्यता रहेको छ। खाना खाएपछि भान्सा कोठा कहिले जुठो राख्नु हुन्न । माझ्न नसकेको खण्डमा जुठो भाडाहरूलाई हल्का पानीले पखालेर राख्नुस। जुठो भाडा राख्नले धन हानी हुने गर्छ तथा उक्त जुठो बसी खानाबाट आउने नराम्रो कुराहरुले हाम्रो वातावरणमा न...
पहिले यो भिडियो हेर्नुस, अहिलेको दुनियाँमा कुनै पनि मुलुकका लागि विश्वसँग जोडिने एउटा अनिवार्य माध्यम भनेको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल नै हो । तर विश्वमा केही यस्ता देश पनि छन् जसको एउटा पनि विमानस्थल छैन । १. एण्डोरा : युरोपको छैटौँ सबैभन्दा सानो देश एण्डोरा विश्वको १६ औँ सानो देश हो । यसको क्षेत्रफल ४६८ वर्ग किलोमिटर छ । यो देशको जनसंख्या ८५ हजार रहेको छ । एण्डोरामा कुनै पनि विमानस्थल छैन । यद्यपि तीन वटा प्राइभेट हेलिप्याड भने छन् । यो देशको सबैभन्दा नजिकको विमानस्थल भनेको स्पेनको विमानस्थल हो जुन १२ किलोमिटर टाढा पर्दछ । यति हुँदाहुँदै पनि एण्डोरामा वर्षेनी लाखौँ पर्यटक घुम्न आउँदछन् । २. लिच्टेन्स्टाइन : युरोपको एक दोहोरो भूपरिवेष्ठित मुलुक लिच्टेन्स्टाइन अष्ट्रिया र स्विजरल्याण्डको बीचमा रहेको छ । यो देशको क्षेत्रफल १६० वर्ग किलोमिटर रहेको छ । यो देशलाई प्राचीन मुलुकको ...
पुरा खबर, घटना १-४० वर्षीया रीता हमाल ‘नाम परिवर्तन’ अहिले निकै त’नावमा छिन्। एकजना भारतीय नागरिकलाई ‘अनलाइन’ मा विश्वास गरेबापत उनी ‘डि’प्रेसन’ मा गइसकेकी छिन्। आफ्नो खाता प्रयोग गरेर अरू कसैले ९५ लाख रुपैयाँभन्दा बढी ‘ठगी’ कारोबार गरेपछि रीता मानसिक त’नावमा परेकी हुन्। सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत उनको भारतमा बस्ने एक युवकसँग चिनजान भयो। उनले नेपाल र भारतमा चल्ने एटीएम आवश्यक परेकाले सहयोग गर्न महिलालाई आग्रह गरे। महिलाले पनि विश्वास गर्दै आफ्नो खाता नम्बर र एटीएम कुरियर गरेर भारतमा पठाइन्। युवकले महिलाको खाता र एटीएम प्रयोग गरेर विभिन्न मानिसहरूलाई ठ’गी गर्न थाले। महिलालाई समस्या तब आयो, जब खातामा पैसा पठाएका पीडितहरूले उनलाई खोजी गर्न थाले। पैसा माग्दै सम्पर्क गर्न थाले। बैंक खातामा अस्वाभाविक रूपमा कारोबार भइरहेको भन्दै प्रहरीले उनलाई सचेत गराएको थियो। उनको वि’रुद्ध प्रह...